Askari ka tirsan ciidamada Ilaalada canshuuraha oo lagu dilay Degmada Wadajir - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
HomeWararkaAskari ka tirsan ciidamada Ilaalada canshuuraha oo lagu dilay Degmada Wadajir
Askari ka tirsan ciidamada Ilaalada canshuuraha oo lagu dilay Degmada Wadajir
Sida ay sheegayaan goobjoogayaal, waxaa degmada Wadajir ee gobolka Banaadir ka dhacay dil toogasho ah. Dilakas ayaa waxaa ka soo baxaya warar dheeraad ah. Kooxo hubeysan ayaa Askari ka tirsan ciidamada Ilaalada Canshuuraha ku dilay Isgooyska Korontada oo aad ugu dhow gudaha Suuqaweyn ee degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho.
Dhanka kale debleyda ayaa dhowr Xabadood Madaxa kala dhacday Askariga,isaga oo isla goobta ku geeriyooda,kadibna la sheegay in ay goobta iskaga baxsadeen,sida ay ku warameen dad goobjoogayaal ah. Ilaa iyo hada dowlada maamulka Gobolka Banadir kama uusan hadlin dhibka ka dhacay deegaankaas.